बिशको लम्पहरु को हटान: संकेत, विनाशकारी, समीक्षाहरु
स्वास्थ्य, प्लास्टिक सर्जरी
आजको प्लास्टिक सर्जरी विभिन्न उमेरका व्यक्तिहरू र समेत सामाजिक समूहहरूको बीचमा धेरै लोकप्रिय छ। त्यसोभए, न केवल सार्वजनिक मान्छे हो, तर पनि सामान्यतया नागरिकको पनि, धर्मनिरपेक्ष व्यवसायहरूबाट टाढा उनीहरूले आफ्नो उपस्थिति सुधार गर्न खोजिरहेका छन्। अब म यस्तो बिशेष प्रक्रियाको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु, बिशको लम्प हटाउन को लागी: जब र कसरी यो कार्य सञ्चालन गरिन्छ।
यो के हो?
सुरुमा, तपाइँ शब्द शब्दावली बुझ्न र वास्तवमा छलफल गरिनेछ भन्ने पत्ता लगाउन आवश्यक छ। Bicha lumps गाल गुफा मा फैटी जनता को एक संग्रह हो कि शरीर को यो विशेष भाग को रूप मा। यो, यो गठन, छाला अन्तर्गत लुकाउँछ र अण्डा अनुहार सिर्जना गर्दछ, यसको कम भागमा अतिरिक्त मात्रा प्रदान गर्दछ।
वैज्ञानिक को पछि बिचि लाम्प्स को नाम ले भनिन्छ जसलाई पहिले यिनी संरचनाहरु लाई विस्तार को वर्णन गरे - फ्रान्सीसी फिजियोलोजिस्ट र एटमीमेटिस्ट मैरी फ्रान्कोइस जवियर बिश।
Bisch lumps को कार्य
यो ध्यान दिनु पर्छ कि शिक्षा को मानव शरीर मा छ भले पनि वैज्ञानिहरु अझै सम्म उनि को आवश्यकता को बुझन को लागि सक्षम नहीं भएका छन्। यस सन्दर्भ मा, त्यहाँ थुप्रै संस्करणहरू छन्, जुन बिशाको ढोकाको उद्देश्य बताउँछ:
यो मुखमा एक विशेष प्याडिंग हो, जसको लागी एक व्यक्ति शरीरको लागि कम खर्चको साथ खाना चोक गर्न सक्दछ।
अन्य शरीरको बोसो जस्तै, बिशको लुम्पले अनुहारलाई विभिन्न प्रकारको चोट र हानिबाट जोगाउँछ।
भर्खरको संस्करण अनुसार, तिनीहरूको मुख्य उद्देश्य नवजात शिशुहरूमा चिसो पलायन सुधार गर्न हो।
साथै, वैज्ञानिकहरूले तर्क गर्छन् कि वयस्कमा, यी शिक्षाले कुनै पनि भूमिका खेल्छ। यसबाहेक, ती वर्षहरूमा उनीहरूले अधिक र अधिक उल्लेखनीय हुन सक्छन्, र अग्रगामी वर्षको नजिक र सबै गालहरूको निचो भाग वजनमा राख्न सक्छन्। यसैले मानिसहरू अक्सर प्रायः तिनीहरूलाई छुटकारा पाउन चाहन्छन्।
तथापि, बिशाका लम्पहरू धेरै उल्लेखनीय छन्, जसले बच्चाहरूलाई सुत्न सक्दछन्। उमेर संग, यी ढाँचाहरू कम देखिने देखिन्छ, किनकि तिनीहरू शरीरको अन्य ऊतकहरू सँगसँगै बढ्दैनन्। यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि यदि एक व्यक्तिले वजन कम गर्न चाहानुहुन्छ भने, बिशको लम्पको आकार त्यहि रहनेछ। सबै पछि, यो धेरै घने फैटी संरचनाहरू छन्, जुन व्यावहारिक आकारमा परिवर्तन गर्दैनन्।
सञ्चालनको प्रयोगको लागि संकेत
कस्ता परिस्थितिमा डाक्टरले बिशको ढोकालाई हटाउन सक्छन्? त्यसोभए, तपाईंलाई याद छ कि यो एक अपरेन्टिभ हस्तक्षेप हो, जुन कुनैपनि अवस्थामा शरीरलाई असर पार्नेछ। त्यसोभए यो प्रक्रिया धेरै गम्भीरतापूर्वक सम्पर्क गर्नु पर्छ, सबै प्रविधिहरू र आपरेशनको विपत्ति बढायो। अधिक भन्दा कम, विशेषज्ञहरूले अनुहारको आकारमा सौंदर्य सुधारको रूपमा प्रक्रियालाई नाम दिन्छन्। अन्य संकेतहरू:
गाल को निचला भाग को उमेर कम।
रोगीको अनुहारको राउन्ड आकार, जसको सम्बन्धमा बिशको लम्पले गालहरू लाई अझ बढी गोल गर्दछ।
शरीरको रूपको तुलनामा बिश को धेरै ठूलो लम्पाहरु।
साथै, यी फारमहरू हटाउन सकिन्छ यदि नवोल तहहरू धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। अपरेसन पछि, अनुहारको कङ्गो धेरै नरम बन्यो।
यो पनि ध्यान दिनुपर्दछ कि अपरेसन भन्दा पहिले रोगीलाई व्यक्तिको लागि कम्प्यूटर मोडलिंग सेवा प्रदान गरिनुपर्छ। यस अवस्थामा, एक व्यक्तिले यो प्रक्रिया कसरी देख्नेछ भनेर हेर्न सक्षम हुनेछ, र निर्णय गर्नुहोस् कि त्यो यस्तो परिणामसँग सन्तुष्ट छ कि छैन।
अपरेसनमा निर्णय गर्दा तपाईलाई सम्झनु आवश्यक छ
यो ध्यान दिइन्छ कि बिशेषका ढोकाहरू हटाउने अपरेसन शरीरको लागि एक व्यावहारिक हानिकारक प्रक्रिया हो (एनेजिशिया को प्रभाव को बाहेक)। तथापि, एक व्यक्तिलाई पहिला केहि सरल नग्नताहरू थाहा हुनुपर्दछ:
यो अपरेसनले 35 मिनेटको औसतमा पुग्छ। यसको पछि, अस्पतालमा समय खर्च गर्न कुनै आवश्यक छैन।
परिचालन हस्तक्षेपको समयमा, स्थानीय र सामान्य एनेस्थेसिया दुवै कार्य गर्न सक्दछ।
अपरेसन पछि, घटनाहरू दृश्यात्मक हुनेछैन, र घोडाहरू पनि रोक्न सक्छन्। दृश्यात्मक प्रक्रियाको बारेमा केहि पनि सम्झना छैन।
बिशाको ढोकाहरू हटाउन सकिन्छ वा पूर्णतया वा आंशिक रूपमा। यसैले एक राम्रो विशेषज्ञ छनौट गर्नको लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ जसले निर्णय गर्न सक्दछ कि कति वसा छोड्नुपर्छ र कति हटाउन सकिन्छ।
यो पनि ध्यान दिनुपर्दछ कि यो व्यक्ति को आकार को पूर्ण रूपमा यी ढाँचाहरु लाई हटाउन को लागी सही गर्न को लागी सही छ। जोगोमेटिक क्षेत्रमा बिशकोको ढोका खोल्दै यो सञ्चालनको अर्को उपन्यास हो। यस अवस्थामा, चीकबोन व्यक्ति देखि अधिक भिन्न हुनेछ। तर, फेरि, यो चिकित्सक द्वारा निर्णय को अंतिम परिणाम मोडेल को स्तर मा आफु संग मर्मत गर्दछ।
जब डाक्टरले बिशको ढोका हटाउन प्रक्रिया चलाउन सक्दैनन्:
रोगीको उमेर 25 वर्ष सम्म हुन्छ। सबै पछि, लुम्प्स अझै पनि आफ्नै मा कम हुन सक्छ।
स्वास्थ्य समस्याहरू: विभिन्न पुरानो रोगहरू, भ्रामक प्रक्रियाहरू। Contraindication मधुमेह mellitus हो, साथ नै रक्त क्लटिंग को उल्लङ्घन।
साथै, डाक्टरहरूले ती रोगीहरूलाई काम गर्ने काम गर्दैनन् जसको वजन सूचकांक अस्थिर हुन्छ।
सञ्चालनको लागि तयारी गर्दै
बिशको लम्प हटाउन अप्ठ्यारोमा तयार पार्न यो महत्वपूर्ण छ। त्यसकारण, यसको लागि यो तयार हुनु आवश्यक छ:
तपाईंले सबै आवश्यक परीक्षणहरू पास गर्न आवश्यक छ।
सम्भावित जटिलताहरूको बारेमा डाक्टरसँग कुरा गर्न पनि महत्त्वपूर्ण छ। यस अवस्थामा, डाक्टरले उनीहरूको पुरानो बीमारी र अन्य नग्नता बारे समस्याको बारेमा सबै जानकारी पत्ता लगाउन बाध्य छ।
यो पनि सुनिश्चित गर्न को लागी कि चिकित्सकले राम्ररी बुझ्यो कि रोगीले सञ्चालनबाट अपेक्षा गरेको कुरा बुझ्न महत्वपूर्ण छ। सञ्चालन पछि परिणाम, यद्यपि उल्लेखनीय छ, तर अनुहार सुधार कट्टरपंथीको रूपमा हुनेछैन किनभने व्यक्तिले आशा गर्न सक्दछ।
र अधिक महत्त्वपूर्ण कुरा, यो अभियान विशेष गरी एक चिकित्सा संस्थामा राख्नु पर्दछ, र एक सौन्दर्य सैलूनमा छैन। आखिर, जटिलताहरु को मामला मा (हुनत उनि धेरै दुर्लभ छन्) तपाईंलाई हात मा सबै आवश्यक चिकित्सा उपकरण को आवश्यकता हुनु पर्छ।
सञ्चालनको बारेमा एकदम केहि
यो स्पष्ट भयो जस्तो कि, बिश को ढेर हटाइयो शल्य हस्तक्षेप को माध्यम ले गरिन्छ। एकै समयमा, त्यहाँ दुई मुख्य विधिहरू छन् जुन विशेषज्ञहरूले प्रयोग गरेका छन्:
तपाईं गाई भित्र भित्रको निर्माण हटाउन सक्नुहुनेछ।
तपाईं गाल को बाहिर मा एक चीज को माध्यम ले गठन हटाउन सक्नुहुन्छ।
पहिलो प्रविधि कम्तीमा खतरनाक र कम चोटलाग्दो छ। सबै पछि, बिशका लुम्पहरू गाई भित्रको नजिक स्थित छ। त्यसोभए, विशेषज्ञले म्यूकोसामा एक चीज बनाउँछ, मांसपेशिहरु लाई बहिष्कार गर्दछ र वसा को ढक्कन निकाल्छ। यस पछि, सरल सीम लागू गरिएको छ, जुन एक निश्चित समय को माध्यम ले मात्र हल गर्दछ। हर्मले कुनै चिसो झिल्लीको कारण होइन। साथै यस प्रकारका अपरेसनले अनुहारमा छाला पुनरुत्थानको लामो प्रक्रियाको आवश्यकता पर्दैन।
मानव अनुहार को अभिव्यक्ति यस्तो छ कि गाई को अंदर मा झुंड को माध्यम ले बिश को ढेर हटान को आसान छ। डाक्टरले यी फारमहरू लाई अर्को, समानांतर सञ्चालनको अवस्थामा मात्र बाहिर निकाल्न प्रस्ताव गर्न सक्छन्। र बिशा को ढोकाहरु को हटान को बस एक आवेदन को रूप मा ले जाएगा। आखिर, यो प्रविधि धेरै जटिल र निराशाजनक छ, यस्तो प्रक्रिया पछि ऊ ऊरहवाही गर्ने प्रक्रिया लामो र अधिक गाह्रो छ। र तंत्रिका समाप्ति को हानिकारक को एक विशाल जोखिम छ, साथै लम्प्स पछि स्थित सलाभरी ग्रंथिहरु।
यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि यो अपरेशन प्लास्टिकलाई मानिएको छैन। आखिर, यस अवस्थामा अनुहार को अभिन्नता परिवर्तन गर्दैन। प्रक्रियाको उद्देश्य रोगी को उपस्थिति को सही गर्न को लागी छ।
यो ध्यान दिइन्छ कि यदि गाईको आन्तरिक छेउमा राखेर अपरेसन चलाइएको थियो भने रिकभरी प्रक्रिया धेरै छिटो र सरल हुनेछ। रोगीले एनेस्थेसिया छोडे पछि, र डाक्टर निश्चित छ कि सबै व्यक्तिको साथमा छ, तपाईं घर जान सक्नुहुन्छ। अस्पतालमा हुनु आवश्यक छैन। एडेमा, पक्कै, हुनेछ। तर तिनीहरू तेस्रो दिनमा पूर्ण रूपमा हराउँछन्। यदि डाक्टरले बायोरेन्डोरबबल सामग्री प्रयोग गर्नुभएन भने, 7-8 दिन पछि, सिलाई हटाउन यो आवश्यक पर्दछ।
यदि बिशाको ढोका हटाउँदा अर्को अपरेसनको लागि एक अतिरिक्त प्रक्रिया थियो, त्यसपछि प्रायः सम्भावनाको प्रक्रिया यति छिटो र सजिलो हुनेछैन। यस अवस्थामा, तपाईं केवल सर्जनमा ध्यानपूर्वक सुन्न आवश्यक छ र ध्यानपूर्वक सबै चिकित्सकको निर्देशनहरू पालन गर्न आवश्यक छ। र त्यसपछि सबभन्दा कम सम्भव समयमा सबै सामान्यमा आउनेछ।
सर्जरी पछि पुनःप्राप्ति प्रक्रिया
बिशा को ढोकाहरु लाई हटाउने को समाप्त हुन्छ? रोगीको प्रमाणले संकेत गर्दछ कि रिकभरी प्रक्रिया पुरा तरिकाले असम्बद्ध छ। त्यसैले, केही हप्ताको लागि सम्पूर्ण शरीर र जबरजस्तीमा शारीरिक व्यायामलाई दिनुपर्छ। पहिला तपाईं मात्र तरल खाना खानुपर्छ, त्यसपछि तपाईंले भत्किने चक्कु चाहिन्छ कि बर्तनबाट जोगिन आवश्यक छ। खानाको तापमान विशेष रूपमा औसत हुनुपर्छ। तातो वा चिसो खानाबाट जोगिन आवश्यक छ। मौखिक स्वच्छता कायम राख्न यो पनि महत्वपूर्ण छ: खाने पछि, आफ्नो दाँत ब्रश वा कम से कम आफ्नो मुख कुल्ला।
औषधि डाक्टर नियुक्त गर्दैनन्। त्यो केवल ड्रग्स को वर्णन गर्न सक्छ कि गाल को भित्र मा सूजन को शुरुवात को रोकथाम मा मदद गर्नेछ।
तपाईलाई थाहा छ र सम्झनु पर्दछ जसको बारेमा महत्त्वपूर्ण नतिजाहरु
बिशको ढोका हटाउन निर्णय गर्दा तपाईलाई के तपाईलाई थाहा छ? सर्जरी भन्दा अघि र पछि, एक व्यक्तिको उपस्थिति धेरै फरक हुनेछैन। यद्यपि यी बोसो जम्मा हटाइनेछ, अनुहारको ओवलले धेरै परिवर्तन गर्दैन। उपस्थिति सही छ। त्यसैले त्यहाँ शिरोवामा केहि चीजको प्रतीक्षा गर्न को लागी कुनै आवश्यकता छैन।
बिश को अर्थ को ढलहरु लाई हटान को कितना गर्दछ? प्रक्रियाको मूल्य भिन्न हुन सक्छ, तर $ 300-500 बीच फरक हुन्छ। यदि क्लिनिक वा सौन्दर्य सैलूनले बुझिएको मूल्य प्रदान गर्दछ भने, यो सबै कुरा क्रममा छ कि भन्ने कुरा सार्थक सार्थक छ। यस अवस्थामा, तपाईंलाई संस्थाको प्रतिष्ठा र डाक्टर को सबै कागजातहरू जाँच गर्न आवश्यक छ जसले सञ्चालन सञ्चालन गर्नेछ।
स्तन वृद्धि: विभिन्न विधिहरूको समीक्षा
प्लास्टिक सर्जन Blokhin: जीवनी र वैज्ञानिक काम
दोस्रो चिउँडो हटाउन विधिहरू
सिलिकन स्तन: फाइदा र बेफाइदा
संरक्षण युवा अनुहार छाला को कस मद्दत गर्छ
"Cherekha" (स्पा, पेस्कोभ क्षेत्र): वर्णन, विशेषताहरू, सेवा र समीक्षा
NVIDIA Quadro 4000: तुलना सुविधा र समीक्षा
योनी को खुजली।
एक बच्चाको गलैँचा कसरी चयन गर्ने?
किन आगो को सपना?
पैराफिन स्नान: पेराफिन थेरेपीको प्रविधि र विपत्ति, विनाशकारी निर्देशहरू
वजन लागि डेयरी-मुक्त आहार: सुविधाहरू, मेनु व्यञ्जनहरु र समीक्षा
को क्रिया को एक morphological विश्लेषण कसरी बनाउने
मानिस - एक predator वा herbivore? शिकारीहरु र शाकाहारी को तुलना
संसारको नियन्त्रण गर्ने गोप्य समाजमा
दबाइ "Kurantil": समीक्षा। फाइदा र गर्भावस्था को समयमा प्राप्त बेफाइदा
स्पेन मा आफ्नै - गाह्रो छैन!